Hemp Lawyer - USDA Hemp Compliance & La-talin Ganacsi oo Hemp Cos ah
Qareenada Hemp waxay caawiyaan Beeraleyda
Hemp garyaqaan, Tom Howard iyo Rod Kight kala hadal arrimaha ganacsiga ee soo foodsaara Beeraleyda Hemp, halka Qareenka Jeff Hall uu sharraxayo cawaaqibka dhabta ah ee dunida ka dhalata jahwareerka sharci fulinta ee ku saabsan ganacsiyada Hemp.
Haddii aad rabto inaad bilowdo ama aad sii waddo ganacsigaaga cannabis, waxaad u baahan tahay inaad kala tashatid a hemp qareen ku saabsan ficilada iyo xeerarka suurtagalka ah. Shuruudo kala duwan ayaa laga hirgaliyaa gobolada kala duwan ee dalka Mareykanka, iyo qareen wanaagsan oo hemp ah ayaa kaa caawin kara inaad u hogaansanto shuruucda oo ganacsigaaga xashiishadda ka dhigto mid amaana. Waa kuwaan waxyaabaha qareenka saxda ahi kaa caawin karo.
Qabyo Qoraalka Qandaraaska iyo Dib u eegista Hemp
Markaad bilawdo ganacsi xashiishad, xittaa hemp, waxaa jira dhowr heshiisyo aad ubaahantahay inaad sameysid. Qeexida booskaaga ganacsiga xashiishadda ayaa ah waxa ugu muhiimsan. Haddii aad rabto inaad noqoto qof ku shaqeysta processor-ka, wax soo iibso, ama iibiye, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa xuquuqdaada iyo waajibaadkaagu ku yihiin kiiska gaarka ah. Qareen hemp ah ayaa kaa caawin kara diyaarinta heshiiska saxda ah ee quseeya booskaaga saxda ah.
Qandaraasyada u dhexeeya milkiilayaasha ganacsiga hemp waa inay lahaadaan wajiyo kala duwan iyo doorar ganacsi. Waxaad u baahan tahay qandaraas haddii aad qorsheyneyso inaad:
• Iibso ama iibso waxyaabaha hemp ama hemp ah
• Iibso ama iibiso ganacsi ama hanti ganacsi
• Samee heshiis iskaashi ganacsi
• Samee heshiis kiro
• Samee heshiis aad ku socodsiiso hemp
• U yeel heshiis ah khilaafaadka ku lug leh lacag iyo xuquuq shaqsiyadeed
Waxaa jira noocyo badan oo qandaraasyo ah oo aad ka dhex abuuri karto dhinacyada iyo qareen hemp ah ayaa kaa caawin kara qoritaanka, dib-u-eegista, ama ka wada-xaajoodka heshiiska saxda ah ee ku habboon ganacsigaaga. Qabyo-qoraalka heshiis muhiim ah ayaa muhiim u ah is-dhexgalka ganacsiga maxaa yeelay naftaada waad ka ilaalin kartaa xaaladaha marka dhinac uusan raacin qodobbada heshiiska.
Is-gacan-ka-qabsashada ama heshiis afka ah kuma difaaci karo si habboon marka la barbar dhigo qaab heshiis qoraal ah uu u ilaalin karo xuquuqahaaga.
U hoggaansanaanta Xeerarka Nidaamka Hemp ee USDA
Waaxda Beeraha Mareykanka (USDA) ayaa daabacday qawaaniinta rasmiga ah Khamiista, Oktoobar 31, 2019. Xeerarkan, Barnaamijka Wax Soo Saarka Hemp ee Mareykanka wuxuu dhaqan gelayaa faahfaahinta saamayneysa wax soo saarka hemp. Xeerarka ku-meel-gaarka ah ayaa loo arkaa inay yihiin fursad lagu horumarinayo wax-soo-saarka iyo iibinta hemp-ka guryaha, kuwaas oo ka faa'iideysan kara soo-saareyaasha Mareykanka iyo macaamiisha labadaba. Gobollada iyo qabiilooyinka Hindiya waxay lahaan doonaan awood aasaasiga ah marka la meel mariyo qorshaha la oggolaaday ee USDA.
Iyadoo qayb ka ah qawaaniinta ku-meelgaarka ah, waxaan garan karnaa waxyaabaha welwelka ugu badan leh ee wax ka qabta waxyaabaha soo socda:
• Shahaadada abuur ku saleysan goobta, argagaxisada, iyo xaaladaha guud ee beero
• Wadarta guud ee xeerarka nuxurka THC ee quseeya labada urursiga THC iyo THCA
• Tijaabinta shaybaadhka diiwaangashan ee u hoggaansan Maamulka Dhaqangelinta Maandooriyaha (DEA)
Xeerarkan gudahiisa, gobolada iyo qabiilooyinka ayaa soo gudbin kara qorshe korjoogteyn iyo nidaamiya soosaarka hemp. Shuruudaha muhiimka ah ee qorshayaasha gobolka waa inay ka mid ahaadaan wadaagida iyo aruurinta macluumaadka, ururinta iyo tijaabinta heerarka uruurinta THC, tuurista dalagyada aan waafaqsanayn, iyo hirgelinta nidaaminta in hemp loo soo saaro si waafaqsan xeerarka ku meel gaarka ah.
Su'aalo badan ayaa soo baxa markay noqoto qawaaniinta gobolka u gaarka ah, waana sababtaas tan uu qareen hemp ah ku siin karo tilmaamo sax ah oo quseeya gobolkaaga. Waa muhiim in la tixgeliyo dhammaan arrimaha khuseeya qorshayaasha USDA ee gobolka gaarka ah. Sidan, waxaad naftaada iyo hantidaada ku ilaalin kartaa ganacsiga xashiishadda.
U hogaansanaanta Hemp Gobolka
The 2018 Farmaajo Farm marinka ayaa bedelay qeexitaanada iyo xaddidaadaha la xiriira xeerarka hemp warshadaha ee Xeerkii hore ee Beeraha ee 2014. Sharciga hadda jira ee "Farm Bill", waxaan ku arki karnaa in sharcigu beddelo xeerarka ku saabsan koritaanka iyo soo-saaridda hemp warshadeed. Sidaas darteed, gobollada iyo qabaa'ilku waxay hadda soo gudbin karaan qorshe iyo codsi ku saabsan wax soo saarka hemp ee gobolka ama dhulalka qabaa'ilka.
Qodobka la xiriira: Sidee Sharciga Beeraha Sharci Ahaan Loogu Talo Galay…. Iyo Marijuana ???
Sharci dejiyayaasha gobolka ayaa wax ka qaban kara arrimo siyaasadeed oo kala duwan — laga soo bilaabo qeexitaanka hemp ilaa laysanka, shahaadooyinka, guddiyada, iyo xuquuqda ilaalinta. Ugu yaraan 47 gobol ayaa leh sharciyo ay ku sameeyaan barnaamijyo ku saabsan wax-soosaarka iyo soosaarka warshadaha.
Gobollo gaar ah oo ay ka mid yihiin Idaho, South Dakota, Mississippi, iyo Degmada Columbia ayaa wali ku guda jira hawsha helitaanka gunnada buuxda ee beerista hemp.
Meelmarinta Sharciga iyo Ka Hortagga Sharciga
Xaaladda gobolka Illinois, waxaan arki karnaa sida gobolka u diyaarinayo inuu u hoggaansamo fulinta sharciga cusub. Mas'uuliyiinta rasmiga ah ayaa sheegaya in sharciga cusub uusan hadda ka dambeeyn buugaagta, laakiin uu dhaqan galayo qaabab badan oo kala duwan. Gobolka Illinois, qof walba wuxuu isu diyaarinayaa in uu gebi ahaanba sharciyeeyo marijuana madadaalo. Dhaqangelinta shuruucda cusub ayaa gabi ahaanba beddeli doonta aragtida milkiileyaasha ganacsiga cannabis badan.
Xaalad la mid ah ayaa ku dhacday Colorado lix sano ka hor markii marijuana madadaalo lagu sharciyeeyey gobolka. Maalin maalmaha ka mid ah, xashiishaddu waxay ahayd sharci darro, kii xigayna, waxay ahayd sharci ahaan qawaaniinta rasmiga ah. Isbeddelkani wuxuu saameeyey qaybo badan oo nolosha ah, laga bilaabo qawaaniinta wadista illaa xeerarka heerka THC. Gobolka Colorado wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee la kulma dhaqan gelinta ficil ee sharciga cusub. Waxaan wali awoodnaa inaan aragno darawalada wadista gawaarida sicirka marijuana, taas oo ah mid ka mid ah cawaaqib xumada marijuana sharci ah.
Xashiishadda ayaa noqotay meelaha ugu badan ee Colorado. Haysashada marijuana waxaa loo oggol yahay xaaladaha qaarkood. Wadada dhinaceeda, waxaan arki karnaa barnaamijyo badan oo qurxinta oo ay maal galiso shirkadaha marijuana. Ganacsiyo badan ayaa qorshahooda ku saleysan kor u qaadista iyo xayeysiinta alaabada marijuana. Colorado waa tusaalaha ugu horreeya ee sida warshadaha cannabis u beddeli karaan xaaladaha ganacsi ee hal gobol ah.
Waxaa looga hayaa in la arko nooca isbedel ee ka dhici doona gobolka Illinois iyo gobollada kale ee u diyaargaroobaya sharciyeeynta marijuana. Marka loo eego saadaasha saxda ah, qadarka ka yar 30 garaam oo ubax cannabis ayaa noqon doona mid sharci ah inta badan qeybaha Illinois sanadka 2020.
Sharciga cusub wuxuu abuuri doonaa suuq furan oo suurta galiya kuwa ka ganacsada daroogada iyo howlaha dambiyada. Si kastaba ha noqotee, muwaadiniinta waxaa lagula talinayaa inay ka soo qaataan alaabooyinka THC kaliya ilo sharciyeed. Tani waxay u abuuri doontaa fursado badan milkiileyaasha ganacsiga inay si sharci ah ugu qeybiyaan waxyaabaha marijuana iyo cannabis.
Arrinta ku saabsan u hoggaansanaanta sharciga ee sharciga, milkiilaha ganacsigu waa inuu qaadaa ficillada lagama maarmaanka u ah ilaalinta ganacsiga iyo qorshayaasha maaliyadeed. La hadlida qareenka hemp wuxuu si weyn u kordhin karaa fursadaha helitaanka shatiyada saxda ah ee hoos imaaneysa qawaaniinta dowladeed ee rasmiga ah.
La xiriir Qareennada Hemp
La xiriir Hemp Qareenka ganacsigaaga:
Waqooyiga Carolina - laakiin u adeegida macaamiisha hemp dalka oo dhan arrimaha federaalka - Qareenka Rod Kight
Gudaha Illinois, iyo waliba u adeegida macaamiisha hemp arrimaha federaalka iyo la tashiga guud ahaan dalka - Qareenka Thomas Howard
U adeegidda milkiilayaasha meheradaha si qalad ah ayaa loogu eedeeyay inay marijuana leeyihiin - Garyaqaan Jeff Hall.